One Young World | The World of Pinkgold
Passion After One Young World
Posted on September 23, 2011 by cuttiepinkgold
လူတွေက ကျွန်မကို မေးကြတယ်ရှင့်။ One Young World ကို ဘာကြောင့် သွားတက်တာလဲ။ တက်ပြီးရင် ဘာရလဲ လို့ပေါ့။ 2010 တုန်းကတော့ ဘာရယ် ညာရယ်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအတိုင်း နိုင်ငံခြားကိုလည်း သွားချင်တာကြောင့်ရယ်၊ နောက်ပြီး လူသစ်တွေနဲ့ တွေ့ချင်တယ်၊ အတွေ့အကြုံသစ်တွေ လိုချင်တယ်။ ဒါတွေကြောင့် လျှောက်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ကံက ကောင်းချင်တော့ Amex Sponsor နဲ့ သွားတက်ခွင့် ရခဲ့တာပေါ့။ ကျွန်မတို့ မြန်မာပြည်က လူတွေမှာက ဓလေ့လို့ပဲ ပြောရမလား၊ သမားရိုးကျ တွေးတယ်လို့ပဲ ပြောရမလား။ စပွန်စာကလည်း ရတယ်ဆိုတော့ ကျွန်မတို့လက်ထဲကို ပိုက်ဆံရောက်လာမယ်လို့ ထင်ကြတဲ့ သူတွေလည်း မနည်းမနောပဲကို။ တစ်ယောက်ယောက်ကများ ပိုက်ဆံရှိလို့ နိုင်ငံခြားသွားတာမဟုတ်ပဲ Program လေးတစ်ခုနဲ့ သွားရရင်ကိုပဲ အဲ့လူအကြောင်းကို ကောင်းတာတွေကော မကောင်းတာတွေကော ပြောလို့ မဆုံးကြတော့ပါဘူး။ လူငယ်တွေမှာ အကောင်းဘက်ကို များများတွေးတတ်တဲ့ အကျင့်ကလေးတွေလည်း ရလာဖို့လိုတယ်လို့ ကျွန်မရဲ့ အပြောအဆိုပေါင်းမြောက်များစွာကို ခံခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံအရလည်း ပြောချင်ပါသေးတယ်။
2010 One Young World တက်လို့အပြီးမှာ ကျွန်မ ဘာတွေပြောင်းလဲသွားလဲဆိုတော့ နည်းနည်းမြောက်ကြွကြွ ဖြစ်သွားတာကို ၀န်ခံပါတယ်။ တစ်ခြားဟာကြောင့်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာမဆို ငါလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အတွေးဝင်လာခဲ့လို့ပါပဲ။ လူငယ်တွေကို Speech လာပေးကြတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ စကားကလည်း သေလို့ရလောက်အောင် ကောင်းနေတော့ ကျွန်မမှ မဟုတ်ပါဘူး။ လူတိုင်းကို ဒီလို တက်ကြွမှုမျိုး ဖြစ်ကြတာ ချည်းပါပဲ။
“You are the very unique generation of human beings”
“You all are amazing bunch of young people”
“You must send poverty, wars and conflicts to the museum”
“Go and speak to your Government and challenge”
“Our generation has failed to you. You all are just to begin. You must change the world”
Filed under One Young World and tagged Environemt, One Young World, Youth |	1 Comment
မနက်စာ စားနေတုန်းမှာပဲ အချင်းချင်းမိတ်ဖွဲ့ကြတာပေါ့.. အီသီယိုးပီးယား၊ ဂါနာ၊ ပါကစ်စတန်၊ အိန္ဒိယ၊ မော်ရေးရှား၊ မက္ကဆီကို၊ ကမ္ဘောဒီယား၊ နိုင်ဂျီးရီးယား.. အို အများကြီး အများကြီးပါပဲ။ ဘယ်သူ့ကိုမှ ဘယ်သူက ရွံ့နေတာမျိုးမရှိကြဘူး။ ရှိန်နေကြတာမျိုးလည်း မရှိကြဘူး.. အင်္ဂလိပ်လိုတွေလည်း မွတ်နေကြတာပဲ.. တော်တော်များများကလည်း နိုင်ငံတကာ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူတွေပါပဲ.. အားလုံးက သူငယ်ချင်းအရင်းကြီးတွေလိုပဲ ဖြစ်သွားတယ်။ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်တောင် နောက်နေပြောင်နေကြသေးတယ်။ ဓါတ်ပုံတွေကလည်း ရိုက်လိုက်ကြတာ မပြောပါနဲ့တော့.. မနက် (၁၀) နာရီလောက်မှာ ကျွန်မတို့တွေအားလုံးကို Badge တွေထုတ်ပေးတယ်။ Badge ထုတ်ဖို့ တန်းစီးနေတုန်းမှာပဲ ကျွန်မကို ကောင်မလေး ချောချောလေးတစ်ယောက် လာမေးတယ်.. ” Are you Tin Myat Htet? ” တဲ့.. “Yeah” လို့ပြောပြီး ကျွန်မလည်း သူ့ကိုသေချာပြန်ကြည့်လိုက်တော့.. “Oh Christine” .. အင်ဒိုနီးရှားက ကျွန်မ သူငယ်ချင်းပါ.. ဖေ့စ်ဘုတ်ထဲမှာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အရမ်းခင်ကြပါတယ်.. “One Young World” ကိုလျှောက်တော့လည်း တူတူပဲလျှောက်ကြတာ.. စပွန်စာရတော့လည်း ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်ကို “American Express” ကပဲ အတူတူပေးတာ.. သူက စူမားတြားကျွန်းရဲ့ TV အစီအစဉ်တစ်ခုက Presenter ပါ.. အင်္ဂလိပ်လိုလည်း အရမ်းကောင်းပါတယ်.. သူ့ကို အပြင်မှာတွေ့ရတာ ပျော်လိုက်တာ မပြောပါနဲ့တော့။ Read the rest of this entry →
London Trip to Attend One Young World Summit (Visiting around the town)
Posted on March 3, 2010 by cuttiepinkgold
ရုတ်တရက် ကျွန်မနိုးလာတော့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ ဟိုတယ်က ၀န်ထမ်းအမျိုးသားတစ်ယောက်ကို တွေ့ပါတယ်.. အဲ့မိန်းကလေးကလည်း ကျွန်မရုတ်တရက်နိုးပြီး ထထိုင်လိုက်တော့ လန့်သွားပုံရပါတယ် ” Oh you scared me” တဲ့.. ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းကလည်း ကျွန်မကိုလက်ညှိုးတွေ ထိုးပြီးတော့ “It’s she. It is she” လို့ ပြောနေပါတယ်။ မိန်းကလေးကို မြင်ဖူးသလိုရှိပေမယ့် ဘယ်သူဆိုတာ စဉ်းစားလို့ကို မရပါဘူး.. ကျွန်မနဲ့အတူနေမယ့် တစ်ခြားနိုင်ငံက Delegate လို့ပဲ ထင်လိုက်ပါတယ်။ သူကပဲပြောတယ်.. ငါတို့နင့်ကိုတွေ့ဖို့လာတာတဲ့.. နင်အိပ်နေလို့ အကြာကြီးပဲစောင့်နေရတယ်တဲ့.. ခုမှ အခန်းထဲဝင်ပြီးလာနှိုးတာ.. အပြင်မှာလည်း လူတွေပါသေးတယ်.. အခန်းထဲကို လာဖို့ခေါ်လိုက်မယ်နော်တဲ့.. အင်္ဂလိပ်လိုပဲ ပြောတာပါ.. ဒါနဲ့ ကျွန်မလည်း “No, I’ll come to the reception” ဆိုပြီး ပြောလိုက်မိတယ်.. အဲ့တော့မှ သူက “ညီမလေး အခန်းထဲကို မလာစေချင်လို့လားတဲ့” ဗမာလိုပြောတယ်.. အဲ့တော့မှ မှတ်မိသွားတာ.. “အားးးးးး မမနေညို”.. မနေညိုက ကျွန်မသူငယ်ချင်း ဘလောဂ့်ဂါပါပဲ..အွန်လိုင်းမှာ ညီအစ်မတွေကို ခင်ကြတာပါ.. ကျွန်မလည်း ၀မ်းသာအားရနဲ့ ခုန်ပေါက်ပြီး အမဘယ်သူတွေ ပါသေးလဲ ခေါ်လိုက်လေ လို့ပြောလိုက်မိပါတော့တယ်။ ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းလည်း အပြင်ကို ပြန်ထွက်သွားတယ်။ အဲ့တော့မှ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်အသေအလဲ လိုက်ဖက်ကြပါရော.. ကျွန်မမှာ ၀မ်းသာလိုက်တာ မပြောပါနဲ့တော့။ အပြင်မှာ Steve ရယ် အမသူငယ်ချင်းနောက်တစ်ယောက်ရယ် စောင့်နေကြတာတဲ့။ Steve ဆိုတာလည်း Blogger ပါ.. သူလည်း လန်ဒန်မှာ အလုပ်လုပ်နေတာ.. ခဏနေတော့ Steve နဲ့ မနေညိုသူငယ်ချင်းလည်းအခန်းထဲရောက်လာတယ်။ ကျွန်မကိုလည်း ပြောလို့ ဆိုလို့ပေါ့.. အိပ်နေလိုက်တာများ.. အပြင်မှာ နှစ်နာရီလောက်တောင် စောင့်နေရတယ်.. ငါက မိုင်(၁၅၀) လောက်ဝေးတဲ့ နေရာကနေ ကားမောင်းလာရတာ ဘာ ညာ ပေါ့။ ကျွန်မကလည်း ဇက်ကလေး ပုလို့ပေါ့လေ။
တစ်ကယ်တော့ အဖြစ်ကလည်း အတော်ကိုရီရပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ ဟိုတယ်က ၀န်ထမ်းတွေက လာတည်းတဲ့ Customer တွေရဲ့ Information ကို အပြင်လူတွေကို မပေးပါဘူးတဲ့။ မနေညိုတို့ ဟိုတယ်ရောက်လာတော့လည်း သူထွက်လာရင် တွေ့လိမ့်မယ် ထိုင်စောင့်နေဆိုပြီး အပြင်မှာပဲ ထိုင်ခိုင်းထားတာပါတဲ့။ တစ်နာရီကျော်ကျော်လောက် သူတို့လည်း ထိုင်စောင့်နေကြပါသေးတယ်။ နောက်တော့မှ Steve က သူ့မှာ အမျိုးလည်းမရှိဘူး.. ဒီကို Summit တက်ဖို့ မြန်မာပြည်ကနေ တစ်ယောက်တည်းလာတာ.. တစ်ခုခုဖြစ်နေရင် ဒုက္ခဖြစ်မယ်. မင်းတို့မခေါ်ပေးရင် ငါတို့တွေ ရဲတိုင်လိုက်မယ်လို့ ပြောတော့မှာ အခန်းတံခါး လာဖွင့်ပေးတယ်ဆိုပဲ။ ပင့်ဂိုလ်းတို့များ အရာရာနဲ့ အကြောင်းကြောင်းပါပဲလားရှင်။
မနေညိုကလည်း သူ့အိမ်လိုက်ခဲ့ပါလားတဲ့.. Summit စမယ့် တနင်္လာနေ့ကို ပြန်ပို့ပေးမယ်တဲ့.. သူကလည်း စနေ တနင်္ဂနွေပဲအားတာဆိုတော့ ကျန်တဲ့ရက်တွေ လာတွေ့ဖို့အဆင်ပြေတော့မှာ မဟုတ်ဘူးတဲ့။ ကျွန်မကလည်း အစကတော့ လိုက်လည်းလိုက်ချင်တယ်.. လိုက်သွားပြန်ရင်လည်း One Young World အဖွဲ့က တစ်ခုခုပြောမှာလည်း စိုးပြန်တယ်။ နောက်တော့ ဘာဖြစ်ဖြစ်လိုက်မယ်ကွာဆိုပြီး အင်္ကျီတစ်ထည် နှစ်ထည်ထည့်၊ အထုပ်ဆွဲပြီး လိုက်ခဲ့ပါတော့တယ်။ အပြင်ရောက်တော့ Reception မှာ One Young World က တာဝန်ရှိသူတွေလည်း ရောက်နေတာတွေ့တယ်။ တစ်ခြားနိုင်ငံက Delegate တွေလည်း ရောက်နေကြပြီ။ ဒါနဲ့ Reception ကို သော့အပ်တော့ အပ်စရာမလိုဘူးတဲ့ ယူသွားလို့ရတယ်တဲ့.. အပြင်သွားမယ်ဆိုရင် နင့်ရဲ့အဖွဲ့ကို အကြောင်းကြားလိုက်ပါလားတဲ့။ ဒီတော့ကျွန်မလည်း တာဝန်ရှိသူတွေဆီကို သွားပြီးတော့ “Hello, I’m delegate from Myanmar” ဆိုပြီး မိတ်ဆက်တော့ “Hi nice to meet u in person” ဘာညာ ကွိကွ ပေါ့လေ.. ဒါနဲ့ကျွန်မလည်း “Do you have any schedule for us tomorrow?” ဆိုပြီးမေးလိုက်ပါတယ်။ Sunday အတွက်ဘာမှမရှိဘူးလို့ သူတို့ကပြောတယ်.. ဒါနဲ့ ကျွန်မလည်း မနေညိုကို လက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ သူက ကျွန်မရဲ့ အမပါ.. သူနဲ့လိုက်သွားချင်လို့ ရမလားလို့ မေးလိုက်တယ်.. မနေညိုကလည်း ၀င်ပြောပေးတယ်.. ညီမလေးကို ခေါ်သွားချင်လို့ပါ တနင်္လာနေ့ ပြန်ပို့ပေးပါမယ်ပေါ့.. သူတို့ကလည်း ရတယ်ခေါ်သွားတဲ့. မန်းဒေးကိုသာ ၂ နာရီမထိုးခင် ပြန်လာခဲ့တဲ့.. ကျွန်မလည်း ကျေးဇူးပါ ကျွန်မက မန်းဒေးကျရင် စပွန်စာပေးတဲ့ အဖွဲ့အစည်းနဲ့လည်း ၁၁ နာရီကို တွေ့ရမှာကြောင့် ကိုးနာရီလောက်ကို အရောက်ပြန်ခဲ့ပါမယ်လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ သူတို့အချင်းချင်းလည်းပြောကြသေးတယ်.. သြော် briefing ပေးမယ်ထင်တယ်တဲ့.. အိုးကေ bye bye ဆိုပြီး ကျွန်မလည်း မနေညိုတို့ Steve တို့နဲ့လိုက်လာခဲ့ပါတယ်။ Steve ရဲ့ ကားနဲ့ပဲ ကျွန်မကို လန်ဒန်မြို့ရဲ့ ညနေခင်းမှာ လျှောက်သွားကြလေသတည်းပေါ့။
Filed under One Young World and tagged One Young World |	Leaveacomment
Posted on February 26, 2010 by cuttiepinkgold
လောကအလှ အွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်းက OYW summit ကို သွားတက်ခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျွန်မကို အင်တာဗျုးလေးတစ်ခု လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အတွေ့အကြုံတွေကို ကိုယ့်ဘလောဂ့်မှာ ပြောပြနေတာနေသလို ဒီလို မီဒီယာ တစ်ခုနဲ့ အင်တာဗျုးလုပ်တာကလည်း လူငယ်တွေဆီကို ပိုရောက်နိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။
Filed under Interview and tagged One Young World |	Leaveacomment
London Trip to Attend One Young World Summit (Leaving Yangon)
Posted on February 24, 2010 by cuttiepinkgold
ကျွန်မ ခရီးမသွားခင် တစ်ရက်နှစ်ရက်လောက်အလိုမှာ One Young World က အီးမေလ်းတွေထပ်ပို့တယ်။ လေဆိပ်ရောက်ရင် ဘယ်သူကလာကြိုမယ် ၊ One Young World Logo ကိုင်ထားတဲ့သူတွေကို အလွယ်တကူပဲ ရှာတွေ့လိမ့်မယ်ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့။ နောက်တော့ မေးခွန်းကိုးခုထပ်ပို့ပြီး အဲ့ဒီမေးခွန်းတွေကို ဗွီဒီယိုဖိုင်တွေလုပ်ပြီး ဖြေပေးပါတဲ့။ You Tube မှာတင်ပြီး Publicity လုပ်ချင်လို့ပါတဲ့။ မေးခွန်းတွေကတော့ ရိုးရိုးလေးတွေပါပဲ။
1.	Why do you want to join One Young World?
2.	Explain what you think it means to be an active empowered global citizen in 2010?
3.	How will OYW help you makeadifference?
4.	What world issue keeps you up at night and how can your generation tackle this problem?
5.	Do you believe you can be part of positive change in the world – how and why?
6.	Millennials are often criticized in the media for self indulgence yet so many of the most drama have come from young people who care enough to makeadifference. What do you think will your generation in this new decade?
7.	Social media helps facilitate social change. What are you doing to harness this power?
8.	If you could dine with one world leader or everyday person who would you meet, and what discuss?
9.	What is your personal project to change the world/your world that you’d like to pitch to world this video? In one minute?
အစရှိတဲ့ မေးခွန်းတွေပါ။ တစ်မိနစ်စာဖိုင်တွေကို ကျွန်မ webcam ရှေ့မှာထိုင်ပြီး ရိုးရိုးလေးပဲ စကားပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီအချိန်မှာ ပုဂံက ဆာဗာပြောင်းလို့ဆိုလား ၊ ဟက်ခံရလို့ဆိုလား အင်တာနက်နှေးတဲ့ ပြသနာက စနေပါပြီ။ ဖိုင်တွေကို ကျွန်မဘယ်လိုမှ ပို့လို့မရပါဘူး။ YouTube မှာ တစ်ခြား Delegate တွေရဲ့ ဖိုင်လ်တွေ တက်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့ facebook One Young World Group ကနေတစ်ဆင့် သိရပါတယ်။ တစ်ချို့ နိုင်ငံက Delegate တွေကျတော့လည်း ဘာဖိုင်မှ မပို့ဘူး၊ မပို့ချင်ဘူးလို့ Forum ထဲမှာ အချင်းချင်းပြောနေကြပါတယ်။ ဒါနဲ့ ကျွန်မလည်း ဖိုင်တွေကို ပို့လို့မရသေးတဲ့အကြောင်းကို One Young World ကို အီးမေလ်းပို့ထားပြီး လန်ဒန်ရောက်မှပဲ တင်ပေးလိုက်တော့မယ်လို့ စိတ်ကူးထားလိုက်ပါတယ်။ လန်ဒန်မှာ အင်တာနက်ကော်နက်ရှင်က အရမ်းကိုမြန်တဲ့အတွက် ရောက်ရောက်ချင်းပဲ တင်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်မတွေးထားခဲ့တယ်လေ။ ပြီးတော့ ကျွန်မရောက်သွားမှာကလည်း Flight Schedule အရ နှစ်ရက်တောင်ကြိုရောက်နေမှာဆိုတော့ အတော်ပဲပေါ့။ One Young World ကလည်း ဒါဟာ မဖြစ်မနေလုပ်စရာမလိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ မပို့ရင်လည်း ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုတော့ မေလ်းပြန်လာပါသေးတယ်။
ဒီကြားထဲမှာပဲ American Express က တာဝန်ရှိသူတစ်ယောက်က မေလ်းပို့လာပါတယ်။ သူတို့က ဘူတန်၊ မြန်မာ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဗီယက်နမ်နဲ့ ဟောင်ကောင်က Delegate ငါးဦးကို စပွန်စာပေးတာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ (၈) ရက်နေ့ နေ့လည်း (၁၁)နာရီမှာ အားလုံးနဲ့ မီတင်လေးတစ်ခု လုပ်ချင်ကြောင်း၊ ဒီပွဲကို တက်ခွင့်ရတဲ့ သူတို့အဖွဲ့အစည်းက Potential Employee ငါးဦးနဲ့လည်း မိတ်ဆက်ပေးလိုပါတယ်ဆိုပြီး အားလုံးကို စာပို့ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ကို စပွန်စာပေးရတဲ့ အကြောင်းကလည်း ဒီလူငယ်လေးတွေဟာ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်နေတာသာ မဟုတ်ပဲ Community ထဲမှာပါ Extracurricular Work အနေနဲ့ ပါဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့သူတွေမို့လို့ ပိုမိုတိုးတက်အောင် မြေတောင်မြှောက်ပေးချင်လို့၊ ပိုမိုတိုးတက်စေချင်လို့ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ကျွန်မတို့ အားလုံးကလည်း ကျေးဇူးတင်ကြောင်း စာတွေပြန်ပို့ကြတာပေါ့။ ကျွန်မအပါအ၀င် Sponsored Delegate တွေပို့တဲ့အီးမေလ်းတွေထဲမှာ တူညီတဲ့စာကြောင်းလေးကတော့.. Read the rest of this entry →
Filed under One Young World and tagged One Young World |	6 Comments
London Trip to Attend One Young World Summit (Preparation)
Posted on February 22, 2010 by cuttiepinkgold
လန်ဒန်ဆိုတာ ကျွန်မ အရမ်းသွားချင်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကျွန်မရဲ့ အိပ်မက်ထဲက မြို့တော်ကြီးပါ။ ဒီမြို့ကြီးကို သွားလည်ဖို့ ကျွန်မ အကြိမ်ကြိမ်အိပ်မက်တွေ မက်ခဲ့ဖူးတယ်။ စိတ်ကူးတွေလည်း ယဉ်ခဲ့ဖူးတယ်။ လန်ဒန်ရောက်နေတဲ့သူတွေနဲ့ မိတ်ဆွေဖြစ်ရတာကို ဂုဏ်ယူစရာလို့လည်း ထင်ခဲ့ဖူးတယ်။ လန်ဒန်ရဲ့ ထယ်ဝါမှုတွေ၊ လန်ဒန်ရဲ့ ခမ်းနားမှုတွေကို ဓါတ်ပုံတွေကြည့်ပြီး ရူးခဲ့ဖူးတယ်။ ”ဘယ်တော့များမှ ဒီမြို့ကြီးဆီ ရောက်နိုင်ပါ့မလဲ” ဆိုပြီး အားတွေလည်းငယ်ခဲ့ဖူးတယ်။ တစ်သက်မှာ တစ်ခေါက်လောက်တော့ ရောက်အောင်သွားအုံးမယ်ဟဲ့ ဆိုပြီး သန္နိဌာန်လည်း ချခဲ့ဖူးပါရဲ့။
၂၀၀၉ ဒီဇင်ဘာလောက်တုန်းက လန်ဒန်မြို့မှာ One Young World Summit လို့ခေါ်တဲ့ Global Issues တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူငယ်တွေဆွေးနွေးပွဲလေးတစ်ခုကို လုပ်မယ်လို့ ကျွန်မ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ကျွန်မကိုပြောတယ်။ စိတ်ဝင်စားရင်လျှောက်ကြည့်ပေါ့တဲ့.. သူက ပထမအဆင့်ကို မဲစနစ်နဲ့ ရွေးတယ်.. အရွေးခံရတော့မှ လျှောက်လွှာတွေ သေချာဖြည့်ခိုင်းတယ်.. သွားဖို့စပွန်စာကို ကိုယ်တိုင်ရှာရမှာတဲ့။ စပွန်စာကြေးကတော့ Euro 3000 တောင်းရမှာတဲ့။ မဲများများရအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ့ Profile ကောင်းကောင်းသာရေးတဲ့.. သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း မဲပေးခိုင်းပေါ့တဲ့။ မဲ ၂၀၀ ကျော်ရင်တော့ ပါဖို့သေချာပါပြီတဲ့။ ဒါနဲ့ကျွန်မလည်း ဟုတ်သော်ရှိ မဟုတ်သော်ရှိ ကိုယ့်အကြောင်းကို ကောင်းကောင်းလေးရေးပြီး One Young World Delegate အဖြစ်အရွေးခံရဖို့ ရှိသမျှလူတွေကို မဲပေးခိုင်းခဲ့တာ အတော်များများ မှတ်မိအုံးမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ facebook မှာ သူငယ်ချင်းများတဲ့ ကျွန်မ တစ်ပတ်လောက်အတွင်းမှာပဲ မဲ ၂၀၀ ကျော်ပြီး Delegate အဖြစ် အရွေးခံရပါတယ်။ နောက်တော့ သူတို့ရဲ့ Application Form မှာ ကိုယ့်အကြောင်းတွေလည်း ဖြည့်ခိုင်း၊ essay တွေလည်းရေးခိုင်းပါတယ်။ ကိုယ်တိုင် စပွန်စာတောင်းဖို့အတွက် သူတို့ဆီက Recommendation Letter, Press Release Letter, Sponsor Letter Format တွေကို ပို့ပေးပါတယ်။ ဒါနဲ့ ကျွန်မလည်း နိုင်ငံတကာ Company ကြီးတွေကို တစ်ခြားသူတွေနည်းတူ စပွန်စာတောင်းရတော့တာပေါ့။ မြန်မာပြည်မှာက ကြီးကြီးမားမား Euro 3000 တတ်နိုင်တဲ့ Organization မရှိတော့.. Nokia, Total, OPEC အစရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေကို စာပို့ပြီး တောင်းပါတယ်။ တစ်ဘက်ကလည်း One Young World အဖွဲ့ကို စပွန်စာရှာရတာ အရမ်းခက်ခဲကြောင်းနဲ့ ကျွန်မတို့အတွက် ကူညီပြီး စပွန်စာရှာပေးဖို့အကြောင်း စာတွေ ဆယ်စောင်မကပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။ One Young World Delegate Forum မှာလည်း စပွန်စာမရလို့ ညည်းကြတဲ့သူတွေ မနည်းမနောပါပဲ။ များသောအားဖြင့် ကျွန်မတို့လို့ Developing Country က Delegate တွေပေါ့။
ဒီလိုနဲ့ ရက်တွေသာ ကြာလာတယ် စပွန်စာလည်း မရခဲ့သလို One Young World အဖွဲ့ကလည်း စပွန်စာမရလို့ မတက်နိုင်ရင်လည်း စိတ်မညစ်ကြဖို့နဲ့ အွန်လိုင်းကနေ ဒီပွဲကြီးကို ဆင်နွှဲနိုင်ကြောင်း စာတွေပို့လာပါတယ်။ ကျွန်မလည်း မျှော်လင့်ချက်တွေ မဲ့လို့ပေါ့လေ။ မြန်မာပြည်က အရွေးခံရတဲ့ အခြား delegate တွေလည်း စပွန်စာ မရကြပါဘူး။ တစ်ကယ်ဆို မြန်မာပြည်က စုစုပေါင်း ငါးယောက် အရွေးခံထားရတာပါ။ Summit တက်ရဖို့တော့ ဝေးပါပြီဆိုပြီး အချင်းချင်းတောင် ပြောနေကြသေးတာ။ Read the rest of this entry →
Filed under One Young World and tagged London, One Young World, Trip |	12 Comments